Mafy ny te ho filoha sy hahazo seza !
Tsy nitsanga-menatra isika !
Tsy nitsanga-menatra ny ekipam-pirenena Malagasy tao anatin’ny fandraisana anjara voalohany tamin’ny fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra na ny “CAN 2019”.
Aza lotoina amin’ny politika !
Hita taratra kely ihany ny fampidirana loko politika amin’ny fanohanana ny Barean’i Madagasikara mandray anjara sy mahomby amin’ny fiatrehana ny CAN 2019.
Miisa 46 ireo nandrotsaka ny antontan-taratasy ho kandida filoham-pirenena. Mazava ho azy fa ny iray amin’ireo izany no ho filoha hitantana an’i Madagasikara afaka volana maromaro, raha tena raikitra sy tsy misy sakana ny fifidianana.
Raha raisina amin’ny heviny miabo, dia tena ady sisika izany ny finiavana hanasoa ity tanindrazantsika ity, ka maro no miady mafy ho lohany hahafa-mandray andraikitra bebe kokoa. Samy manana ny tetikasany sy ny vinany ary ny programany ireo kandida, ary tsy misy ratsy fa mifameno ireo. Raha amin’ny lafiny iray indray dia mety maherihery angamba ny fiteny raha hilaza, fa toy ny kilalaon-jaza ny firotsahan-kofidiana, ka toa manao daholo izao bodo sy adala izao. Tsy mahay mifandamina sy mifandrindra fa samy mba te ho lohany avokoa e! Misy ny tena manam-bola tsy toko tsy forohana, ary ao ny mandany mandany harena mihitsy. Raha tena hanasoa ny firenena tokoa, maninona sy nahoana no tsy tonga dia manao izany mivantana eny anivon’ny fiarahamonina, dia atao fifaninana masina e? Ny fahefana aloha izao no tena mahamaika, ka toa vitsy no mba afaka hanasoa mivantana ny firenena ivelan’ny fananana fahefana raha tarafina amin’ity firotsahan-kofidiana ity. Mariky ny demokrasia ihany koa anefa io, ka tsy hifanomezan-tsiny e! Ho avy ny propagandy atsy ho atsy, ka asa lahy raha mba hiova fisaina sy fijery amin’izay Ramalagasy ka tsy ho sodokan’ny andrika ivelany sy ny ronono an-tavy na ny fizaram-bola na zavatra tsy mahavita taona.